थप दाइजो माग गर्दै परिवारबाटै निर्घात कुटिइन लक्ष्मी, श्रीमान पक्राउ
News Category 2079/01/15
थप दाइजोको माग गर्दै सप्तरीकी एक महिला परिवारबाटै निर्घात कुटिएकी छिन् ।
जिल्लाको रुपनी गाउँपालिका ६ बिरेन्द्र बजारकी २७ वर्षिया लक्ष्मी भगत पति संजिव, ससुरा शिवदयाल, सासु सीता, जेठानी अन्जु र नन्द रन्जुबाट निर्घात कुटिएकी हुन् ।
मागे जतिको दाइजो नल्याएको तथा आफूहरु बिरुद्ध प्रहरी र अदालतसम्म पुगेको निहुमा तीन दिन अघि परिवारबाट निर्घात कुटिएकी उनको उपचार स्थानिय गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा भइरहेको छ ।
कुटपिटबाट उनको घाँटी, ढाड, पाखुरा, टाउँको लगायत शरीरभरि चोट लागेको छ । दराजबाट लुगा निकाल्दै गरेका बेला अचानक किन दराज खोलेको ? भनेर प्लास्टिकको पाइप, लाठी र मुड्कीले अन्दाधुन्द कुटपिट गर्न थालेको उनले सुनाइन ।
उनको शरीरको विभिन्न भागमा गहिरो चोट देखिएकाले चिकित्सकले थप उपचारका लागि बाहिर लैजान सल्लाह दिएको बुबा राजेन्द्र साहले बताए ।
रौतहट जिल्लाको माधवनारायण नगरपालिका माइत भएकी लक्ष्मीमाथी उनको परिवारले गरेको पार्शविक हिंसाको चस्यो पहिलो घटना भने होइन् । भगत पेट्रोल पम्पका संचालक संजिवसँग चार वर्षअघि विवाह गरेकी उनले यस अवधीमा पति, सासु, ससुरा, नन्दको कुटाईका कारण पटक पटक मृत्यु शैय्यामा पुग्नु परेको बताइन् ।
विवाहको केही महिनापछि नै परिवारबाट दाइजोका लागि यातना दिन सुरु भएको उनको भनाई छ । विहेमा सात धुर जग्गा बेचेर दाइजो दिएको बताउँदै लक्ष्मीका बुबा राजेन्द्रले भने, थप दाइजो माँग भई आएको र आफ्नो हैसियतले नभ्याउने जवाफ फर्काए पछि छोरीमाथी यातना दिने क्रम बढ्दै गएको हो ।
निरन्तरको यातना सहन नसकेपछि उनी सप्तरी जिल्ला अदालतमा घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा गर्न पुगेकी थिइन् । उक्त मुद्दामा २०७८ पुस १९ गते अदालतले अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारि गरेको थियो । आदेलतको आदेश अनुसार लक्ष्मीलाई प्रहरीले सुरक्षित साथ बस्ने गरि केही दिन अघि मात्र गृह प्रवेश गराएको थियो । तर त्यसपछि विपक्षि बनाइएका परिवारका सदस्यहरु झन उग्र रुपमा प्रस्तुत भएको लक्ष्मीको भनाई छ ।
अदालतको आदेशपछि गृह प्रवेश पाएकी छोरीमाथी पहिले भन्दा पनि झन यातनाको क्रम बढ्यो, बुबा, राजेन्द्रले भने, अब कसरी र कहाँ न्याय पाउने ? पीडित महिलालाई निशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरिरहेकी मधेश प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यलय राजबिराजकी कानुनी अधिकृत अधिवक्ता किरण साहले विभिन्न बहानामा लक्ष्मी माथी भएको हिसां विरुद्ध आफु अधि बढेको र पिडितलाई न्याय मिल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका डिएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले कुटपिटमा संलग्न पिडित महिलाका पति संजिबलाई विहिबार पक्राउ गरिएको जानकारी दिदै उनका ससुरा शिवदयाललाई भने अस्वस्थ्य रहेका कारण तारेखमा छाडिएको बताए । घटना बारे थप अनुसन्धान समेत भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।